Little Myanmar: º MRTV means
A Meeting Point of Myanmar; Burmese (formerly known as Burma [a] Union of Burma)
ယနေ့ကြွလာ မိတ်သဟာ ချမ်းသာကိုယ်စိတ် မြဲပါစေ။ Thank you all to support our Little Myanmar.. Enjoy staying with us.. See you again!
Myanmar Latest News Headlines
VOA News: Burma
º MRTV means
Myanmar Radio and Television (MRTV)
- နိုင်ငံတကာသတင်းဆိုသည်မှာ China Central Television (CCTV) ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။
- အခြားနိုင်ငံမှ မိမိထံလာပါက "ဂါဝရပြုတွေ့ဆုံ"ရန်လာခြင်းဖြစ်ပြီး၊ မိမိကသွားရသူဖြစ်ပါက "သွားရောက်တွေ့ဆုံ" ဟုသုံးစွဲရသည်။
- သတင်းကြော်ငြာနေစဉ် နောက်မှလူတစ်ယောက်စ နှစ်ယောက်စ မှအလုပ်ရှုပ်ဟန်ဆောင်ပြရသည်။ (ဥပမာ ကျောပေး၍တောင်ခြစ် မြောက်ခြစ်လုပ်နေရန်)
- နိုင်ငံခြားဇာတ်လမ်းဆိုသည်မှာ "တရုတ်" သို့မဟုတ် "ကိုရီးယား" ဇာတ်လမ်းများကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။
- နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများသည် "လိုအပ်သည်များကိုဖြည့်စွက် မှာကြား၍ပြန်လည်ထွက်ခွာ" သွားသူများသာဖြစ်ကြသည်။
- ပြည်သူလူထုဆိုသည်မှာ "အဖြူနှင့်အစိမ်း" သို့မဟုတ် "အဝါရောင်ဝမ်းဆက်" သို့မဟုတ် "အပြာရောင်ဝမ်းဆက်" များသာ ဝတ်ဆင်ကြသည်။
- မြန်မာနိုင်ငံတော်သည် ကြီးမားလွန်းသဖြင့် နေ့မအားညမနား အနှစ်နှစ်ဆယ်နီးပါး တည်ဆောက်သော်လည်း လမ်း၊တံတားများ ဆောက်၍မကုန်နိုင်။
- နိုင်ငံတော်၏အသုံးစရိတ် နှင့်ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်း သည်ပြည်သူများအားထုတ်ပြန်ရန်မလိုအပ်ချေ။ (ဝါ) အသိပေးရန်မလိုအပ်။
- ယင်းသို့မထုတ်ပြန်သော်လည်း လမ်း၊တံတား၊ဆည်မြောင်း များဆောက်လုပ်ရာတွင်နိုင်ငံတော်မှစေတနာဖြင့်အကုန်အကျခံပေးနေရသည်။
- စစ်သားများပင်ဖြစ်လင့်ကစား နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများ သည် လယ်ယာလုပ်ငန်းမှအစ ပိဋိကတ်သုံးပုံ အဆုံး ကျွမ်းကျင်နှံ့စပ်ကြရာ ဝိနည်းတော်နှင့်အညီ နေထိုင်နိုင်ရန် ရဟန်းများအားညွှန်ကြားနိုင်သည်။
- မည်သည့်အခါမှ အစိုးရနှင့်ပြည်သူ သဘောထားကွဲလွဲမှုများမရှိသော်လည်း "ပြည်ပအားကိုးပုဆိန်ရိုး"ဆိုသည့်လူနည်းစု အတွက် မြန်မာ့အသံမှ "စစ်မှန်သောမျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်" ဆိုသည့်ဖွင့်ဆိုချက်ကို လွှင့်ထုတ်ပေးနေရသည်။
- နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများ ဘုရားကျောင်းကန်တက်ခြင်းသည် သတင်းထူးဖြစ်သည်။
- ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီးနှင့်ဆရာ၊ ဆရာမ များသည် ပညာရေး၏အရေးပါပုံကို မသိကြချေ။ နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများက ရံခါမလပ် ပညာရေးသည်အရေးကြီးသည်ဟု မှာကြားရသည် ဟူ၏။
- အမြဲကြားရလေ့ရှိသည့်စကားလုံးများ "ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခြင်း နှင့် အချိန်နှင့်တပြေးညီဆောင်ရွက်ခြင်း"
- အမြဲ မကြားရ သောစကားလုံးများ" စီးပွားရေးကျဆင်းခြင်း ၊ နှောင့်နှေးကြန့်ကြာ သွားခြင်း"
- မေးခွန်းနှင့်အဖြေ မှန်အောင်မဖြေ နိုင်ပါက ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီး ဖြစ်နိုင်သည်။ (မှတ်ချက်။ ဥပဓိ ကောင်းရန်မလို။)
Posted by KS at 2:42 AM
Labels: Myanmar Jokes
Asia > South East Asia > Union of Myanmar United Nations ASEAN
Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia
Myanmar Philippines Singapore Thailand Vietnam
NOAA Expect La Niña in Myanmar
.....အမေရိကန် အမျိုးသား သမုဒ္ဒရာ နှင့် လေထု စီမံရေးရာဌာန(NOAA) ၏ သုတေသနပြု စစ်တမ်းများအရ လာနီညာကြောင့် လာမည့် လများ၌ အရှေ့တောင်အာရှဒေသတွင် ပုံမှန်ထက် ပိုမိုအေးမြသည့် ရာသီဥတုနှင့် ရင်ဆိုင်ရမည် ဖြစ်ပြီး မိုးများခြင်း၊ မြစ်ရေကြီးခြင်း၊ မြေပြိုခြင်းများ ကြုံတွေ့ရနိုင်သည်ဟု ဆိုသည်။
၂၀၁၀-၁၁ ခုနှစ်တွင် ဖြစ်ပေါ်မည့် လာနီညာရာသီဥတုကြောင့် ဧရာဝတီမြစ်၊ ချင်းတွင်းမြစ်၊ စစ်တောင်းမြစ်၊ သံလွင်မြစ် စသောမြစ်များ စက်တင်ဘာလနှင့် အောက်တိုဘာလတွင် ရေကြီးနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းမှုကြောင့် ချင်းပြည်နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း (အထက်ပိုင်း)၊ မန္တလေးတိုင်း (မိုးကုတ်မြို့နယ်)၊ ကချင်ပြည်နယ်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းတို့တွင် မြေပြိုမှုများကို သတိရှိရန် လိုအပ်ကြောင်း ဒေါက်တာထွန်းလွင်က ဆိုသည်။
ထို့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ မိုးလွန်ကာလ အောက်တိုဘာ၊ နိုဝင်ဘာလတို့တွင် မုန်တိုင်းအန္တရာယ်ကိုလည်း သတိပေး ပြောကြားသွားသည်။
Referred Article: ဧရာဝတီ၊ ဟိန်းဇော်
လာနီညာ ရာသီဥတုကြောင့် ရေကြီး မြေပြိုမှုများ ဖြစ်နိုင်
Main Cause of Supreme Heat on Myanmar
စစ်အစိုးရ လက်ထက်တွင် ၀ိသမ လောဘသားများသည် အာဏာပိုင်တို့နှင့် ပူးပေါင်းကာ သဘာဝရင်းမြစ် သစ်တောကြီးများကို ဖျက်ဆီးပြီး၊ နိုင်ငံခြား တိုင်းပြည်များသို့ မိမိတို့ ကိုယ်ကျိုး စီးပွားအတွက် တရားမ၀င် ရောင်းစားလျက် ရှိရာ ယခု အခါ ရခိုင်ရိုးမနှင့် ပဲခူးရိုးမတို့ မှာ သစ်ပင်များ ပြောင်သလင်းခါ နေရလေပြီ။...
...သစ်တော ပြုန်းတီးမှုကြောင့် အပူလွန်ကဲကာ မြေဆီ သြဇာ ဆုတ်ယုတ် ပျက်စီးပြီး စပါးအထွက်နှုန်း ကျဆင်းနေသလို ငရုတ်၊ ခရမ်း၊ ပဲ၊ ပြောင်း စသည့် ကောက်ပဲသီးနှံများလည်း ဖြစ်ထွန်းမှု မရှိတော့သဖြင့် ဒေသခံများ ဆင်းရဲ ကျပ်တည်းမှုနှင့် ရင်ဆိုင် နေကြရသည်။...
Referred Article: Arakan Review ၊ ခိုင်မင်းစံ (ဒွါရာဝတီ)
Drought Affects Entire Myanmar
... အခြားသောနိုင်ငံများနှင့်ယှဉ်လျှင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် စက်ရုံကြီးများ အနည်းငယ်သာရှိသော်လည်း နအဖကသစ်များကိုခုတ်၍ ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် တရုတ်နိုင်ငံသို့ တင်ပို့ရောင်းချပြီး ကိုယ်ကျိုးစီးပွါးအတွက် သုံးစွဲလွန်း...
“သစ်တောတွေခုတ်တာ ၂-နှစ် ၃-နှစ် မကတော့ဘူး။ ဆယ်စုနှစ်လောက်ရှိပြီ။ နအဖက ဒီလိုသာဆက်ပြီး ခုတ်နေမည် ဆိုရင် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး သစ်တောတွေ ပြုန်းတီး ရာသီဥတုဖောက်ပြန်ပြီး မိုးခေါင်ရေရှားတဲ့ ပြဿနာပိုကြုံရဖွယ်ရှိတယ်”...
Referred Article: Burmese News International ၊ သျှမ်းသံတော်ဆင့်သတင်း
ရာသီဥတုဖောက်ပြန် အင်းလေးကန်ကြီးမကြုံစဖူး သိသိသာသာခန်းခြောက်
Unsafe New Buildings in Yangon
...ရန်ကုန်တွင် မကြာသေးမီ နှစ်များ အတွင်း ဆောက်လုပ် ခဲ့သည့် အထပ် မြင့်တိုက် အများအပြားသည် ငလျင် လှုပ်သည့်အခါ ပြိုကျနိုင်ဖွယ် ရှိကြောင်း ဆောက်လုပ်ရေး ၀န်ကြီးဌာနတွင် တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့် အင်ဂျင်နီယာ တဦးက ပြောသည်။
“တိုက်ဆောက်ရင် အရည်အသွေး စစ်ဆေးတဲ့ အပိုင်းကို အစိုးရက ဖိဖိစီးစီး မလုပ်နိုင်ဘူး။ ကန်ထရိုက် တွေကလည်း အရည်အသွေးပိုင်း စစ်ဆေးတဲ့ စည်ပင် အရာရှိတွေကို လာဘ်ထိုးပြီး စိတ်ကြိုက် ကုန်ကျစရိတ် လျှော့ဆောက်တာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် အရမ်းကို အန္တရာယ် ကြီးပါတယ်” ဟု သူက ရှင်းပြသည်။
အသုံးပြုသော ဘိလပ်မြေ၊ သံချောင်းများမှာ သတ်မှတ်ထားသည့် စံ၊ အရည်အသွေး မရှိသောကြောင့် အန္တရာယ်ကြီးသည့် အဆောက်အအုံများဖြစ်သည်ဟု ထိုအင်ဂျင်နီယာက ပြောသည်။
Referred Article: ဧရာဝတီ၊
ရန်ကုန်မြို့လယ်တွင် တိုက်ပြိုကျ၊ တဦး သေဆုံး
84 model & Below Cars To Expel soon From Yangon
ရန်ကုန်တွင် မောင်းနှင်နေသော ၁၉၈၄ မော်ဒယ်နှင့် ၎င်းအရင် ကားများကို ၂ဝ၁ဝ-၂ဝ၁၁ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ စတင်၍ နယ်မြို့များတွင်သာ မောင်းနှင်ခွင့် ပြုတော့မည်ဟု ရန်ကုန်တိုင်း ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန (ကညန) ထိပ်တန်း အရာရှိကြီးတဦးက ပြောသည်။...
...''လူတွေ အထင်မှားနိုင်တာက မော်ဒယ်တွေ အနိမ့်ဆိုရင် နံပါတ်အနိမ့်တွေ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ တွေးမိပြီး မှားနိုင်တယ်။ ၁၉၈၄ မော်ဒယ် အောက်ကိုပဲ နယ်တွေအတွက် အသုံးပြုရမှာ'' ဟု (ကညန) အရာရှိကြီးက ဆိုသည်။
Referred Article: မဇ္ဈိမ၊ မင်းသက်
မော်ဒယ်နိမ့် ကားများ နယ်နှင်မည်
Suicides in Myanmar
...“စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အပြောင်းအလဲဆိုတာ လူတိုင်း ဘဝတသက်တာမှာ တခါလောက်တော့ ကြုံတယ်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မသိကြလို့သာ။ အဲဒီလို တသက်မှာ တခါလောက်ကြုံတတ်တဲ့ စိတ်ဓာတ် အပြောင်းအလဲကို မကျော်လွှားနိုင်ရင် ထွက်ပေါက် ရှာကြတာပေါ့။ စိတ်ဓာတ် မခိုင်မာတဲ့သူတွေ လုပ်လေ့ရှိကြတာပါ” ဟု ရန်ကုန်မှ အထွေထွေရောဂါကု ဆရာဝန် ဒေါက်တာ မျိုးအောင်က ရှင်းပြသည်။
ပဋိပက္ခကိုဖြစ်စေသောစိတ်၊ အပြောင်းအလဲ လက်မခံလိုသည့်စိတ်၊ ဖိအားပေးခံနေရသောစိတ်၊ လိုအင်ဆန္ဒ မပြည့်သောစိတ်နှင့် ငြီးငွေ့သော စိတ်တို့က သေကြောင်းကြံစည်ရန် တွန်းအားပေးသော အကြောင်းရင်းများ ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါ ဆရာဝန်က ပြောသည်။...
...“စိတ်ဖိစီးမှုဆိုတာ လူတိုင်းမှာ ရှိတယ်။ ကိုယ့်အသက်ကို ရန်ရှာတဲ့ အခြေအနေမျိုးအထိ စိတ်ဖိစီးမှုမဖြစ်အောင် သတိထားပြီး နေထိုင်ရတယ်။ နောက်တခုက ဖြစ်လာပြီဆိုရင်လည်း အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ဖြေရှင်းပြီး စိတ်သက်သာမှု ရအောင် ဖန်တီး နေရမယ်။ တရားထိုင်တာ၊ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်တာတွေကတော့ အကောင်းဆုံးပဲ။ ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်း စိတ်ကျတဲ့ သူတွေကို တွေ့ရင်၊ မိသားစုဝင်တွေကို ဆရာဝန်နဲ့ တွေ့ဖို့အတွက် အကြံပေးသင့်တယ်” ဟု ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် စိတ်ပညာဌာနမှ ပါမောက္ခ တဦးက ပြောဆိုသည်။...
Referred Article: ဧရာဝတီ၊ ကြည်ဝေ
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သေကြောင်းကြံစည်သူ များပြားလာ
...မြန်မာပြည်မှာ တိုက်လေယာဉ်က ပြည်သူပြည်သားတွေထက် အရေးကြီးနေပုံရတယ်။ မြန်မာပြည်မှာလည်း ပီရူးနိုင်ငံမှာ ကြုံခဲ့သလို အိတ်ခ်ျအိုင်ဗီ၊ အေအိုင်ဒီအက်စ် ဝေဒနာနဲ့ တိုင်းသူပြည်သားတွေ ရင်ဆိုင်နေရတာက ဆယ်စုနှစ်တခု မကတော့။...
...နောက်တချက်ကလည်း လတ်တလော အဖြစ်အပျက်ကို ပြန်ကြည့်ရင် ၂ဝဝ၈ ခုနှစ်အတွင်း နာဂစ်မုန်တိုင်းဒဏ်ကြောင့် လူတသိန်းလေးသောင်းနီးပါး သေဆုံးခဲ့ပြီး ရှိသမျှ၊ ပိုင်ဆိုင်သမျှ ပစ္စည်းတွေ ဆုံရှုံးခဲ့ရတဲ့ လယ်သမားတွေ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်မှာ သန်းနဲ့ချီပြီး ရှိနေတာပါ။ သူတို့အတွက် စစ်အစိုးရက လောက်လောက်လားလား ကူညီခဲ့ပါသလား။...
...ပြိုင်ကားမောင်းနေရအောင် မြန်မာပြည်ရဲ့ ဓနက အဲသလောက် ပိုလျှံနေလို့လားလို့ မေးစရာ ဖြစ်လာပါတယ်။ ဂေါက်သီးကွင်းသစ်တွေ ဖွင့်လှစ်ပြီး ဂေါက်သီးရိုက်နေတာကိုပဲ လွန်လှပါပြီ။...
...ငွေ အကုန်တကာ့ အကုန်ဆုံး ကိစ္စကြီး ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် နေပြည်တော်သစ်ကြီး တည်ဆောက်ခဲ့တာနဲ့ ကာကွယ်ရေးအတွက် မြေအောက်လှိုဏ်ခေါင်းတွေ တူးဖော်ဆောက်လုပ်နေတာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်သားတွေအတွက် မြို့တော် နောက်ထပ်အသစ်တခု မလိုပါ။ အမှောင်ထဲမှာ ဆင်းနေစရာ မလိုတဲ့အတွက် လှိုဏ်ခေါင်းတွေ၊ ဥမင်တွေလည်း မလိုပါ။ နိုင်ငံသားတွေအတွက် အလွန်လိုအပ်နေတာကတော့ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေးနဲ့ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးတွေအတွက် အကူအညီတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီကဏ္ဍတွေအတွက် ငွေကို မသုံးဘဲ တလွဲတွင် ဆံပင်ကောင်း နေကြတယ်။...
...ရောဂါအထဆုံး ကိစ္စကတော့ နျူကလီးယား ဓာတ်ပေါင်းဖို တည်ဆောက်ရေးပါ။ မြန်မာပြည်မှာ နျူကလီးယား စွမ်းအင်သုံးဖို့ အရေးတကြီး လိုနေသလားလို့ စောကြောစရာ ရှိလာတယ်။...စွမ်းအင်အတွက် မြန်မာပြည်သားတွေ ပူစရာ မလိုပါ။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကနေ သဘာဝအရင်းအမြစ်ကို နိုင်ငံသားတွေ သုံးစွဲခွင့် မရတာကတော့ အတော် ရင်နာစရာ ကောင်းပါတယ်။...
...နျူကလီးယားရောဂါ အရူးထတာကြောင့် စစ်ဗိုလ်အများအပြားကို ရုရှားဆီ ပညာသင်လွှတ်တယ်။ ငွေအမြောက်အမြား သုံးစွဲရတယ်။...တချိန်ထဲမှာပဲ ပြည်သူတွေကတော့ ပါးစပ်ဟောင်းလောင်းနဲ့ ငတ်နေရပါတယ်။...
...ကလေးငယ်အများစု ပါဝင်တဲ့ အငတ်ဘေးနဲ့ သေဆုံးခဲ့သူ မြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံသားတွေ သန်းနဲ့ချီပြီး ရှိခဲ့တာကို ကျနော်တို့ မမေ့သင့်။ ရိုးရိုးနဲ့ လွယ်လွယ်ပြောရရင် အနုမြူထိပ်ဖူးတပ် ဒုံးကျည်ဟာ ကိုက်စားလို့ မရပါ။ အနုမြူထိပ်ဖူးတပ် ဒုံးကျည် အလုံးတထောင် ပိုင်ပြီး တိုင်းသူပြည်သားတွေက ငတ်နေတယ်၊ မွဲနေတယ်၊ ပညာမတတ်၊ နိုင်ငံတကာအလယ်မှာလည်း မဝင်ဆန့်လို့ ဆိုပါရင်...
...နိဂုံးချုပ်ရရင် ၂ဝ၁ဝ မှာ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပဖြစ်လို့ အစိုးရသစ်၊ ပါလီမန်သစ်တွေ ရှိလာတဲ့တိုင် အခွင့်အရေး မှန်သမျှကို စစ်တပ်နဲ့ သူတို့နောက်မြီးဆွဲတွေက ဖားလာလည်း သိမ်း၊ ငါးလာလည်း သိမ်း၊ အကုန်လုံး သူတို့ အိတ်ထဲ ထည့်နေသရွေ့ တိုင်းပြည်ကြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် လုပ်နိုင်မှာ မဟုတ်...
Referred Article: မဇ္ဈိမ၊ ဇော်မင်း
နှစ်ခါသုံးခါ အလိမ်ခံရမှတော့ ကိုယ့်အပြစ်ပေါ့
Unhealthy Cooking Oil in Myanmar
...ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ စားသုံးရန်မသင့်ဟုဆိုကာ ပိတ်ပင်ထားသည့် စားဆီ (၄) မျိုးအနက် ကျောက်ပုစွန်တကောင်တံဆိပ် စားဆီများကို မြန်မာကုန်သည်များက နေ့စဉ်တန်ချိန် ထောင်ချီ၍ မဲဆောက်မြဝတီ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး လမ်းကြောမှတဆင့် တရားမဝင် ပြန်လည်တင်သွင်း...
...ထိုင်း ဆီတင်ပို့သည့် လုပ်ငန်းခွင်မှ မြန်မာအလုပ်သမားတဦးက “ဆီကတော့ အရင်ရော၊ အခုရော ပို့တာကတော့ ဒီဆီပါပဲ။ မြန်မာဘက်က ကုန်သည်တွေရဲ့ လိုအပ်ချက်အရ ဆီပုံးမှာ တံဆိပ်တွေအမျိုးမျိုး ပြောင်းတပ်ပေးရတာတွေတော့ ရှိတယ်”...
...ပိတ်ပင်ထားသည့်ဆီများကို စားသုံးမိပါက အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်း ရောင်ရမ်းခြင်း၊ ပျို့အန်ခြင်း၊ ဦးနှောက်အာရုံကြော ထိုင်းမှိုင်းခြင်း၊ ကင်ဆာရောဂါဖြစ်စေခြင်းနှင့် မျိုးရိုးဗီဇ ထိခိုက်စေခြင်းတို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟု မြန်မာကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ရေးသားဖော်ပြထား...
Referred Article: ခေတ်ပြိုင် ဂျာနယ်၊ ရဲရင့်
'ပိတ်ပင်ထားသည့် စားသုံးဆီများ မြန်မာပြည်တွင်း ပြန်လည်တင်သွင်း'
Nowadays Myanmar with Fortune Teller
...“အနိမ့်ဆုံးအဆင့်ကနေ အမြင့်ဆုံးအဆင့်အထိက ဗေဒင်၊ ယတြာနဲ့သွားနေကြတာပဲ။ တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တာတောင် လောကီပညာနဲ့ အုပ်ချုပ်နေတာကိုး”ဟု စာရေးဆရာက ဆို...
...ယင်းကဲ့သို့ ဗေဒင်၊ ယတြာယုံကြည်ကြသည်ဆိုရာတွင် လူတို့၏ ကံ၊ ဉာဏ်၊ ဝီရိယတွင် ဉာဏ်နှင့် ဝီရိယ ဘက်က ပိတ် နေသောကြောင့် ကံကိုပဲအားကိုလာကာ အဆိုပါ ဗေဒင်၊ ယတြာများကို ယုံကြည်လာကြခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ထိုင်းနိုင်ငံ ရောက် ဦးပဉ္ဇင်းတပါးက မိန့်ဆိုသည်။
“ဉာဏ်နဲ့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်လည်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းကြိုးစားခွင့်မရှိဘူး၊ ဝီရိယနဲ့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်လည်း ချမ်းသာခွင့် မရှိတော့ လူရဲ့ပွင့်နေတဲ့ ကံတခုကိုပဲ အားကိုတဲ့အခါမှာ ဗေဒင်ဆရာတွေက ပြောတဲ့အတိုင်းပဲ ထီပေါက်နိုးနိုး၊ ဟိုက ဒီက ရနိုးနိုးနဲ့ ဖြစ်နေကြတာပါ”ဟု ယင်း ဦးဉ္ဇင်းက မိန့်သည်။
အကယ်၍ ဉာဏ်နှင့် ၀ီရိယပွင့်ပြီး ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး၍ အလုပ်လုပ်တိုင်းအဆင်ပြေနေမည်ဆိုလျှင် ဗေဒင် တွက်ချိန် ရမည် မဟုတ်ကြောင်း၊ အဓိကမှာ အလုပ်အကိုင် ခက်ခဲသည့်ပြဿနာကြောင့်ဖြစ်သည်ဟု အဆိုပါ ဦးပဉ္ဇင်းက သုံးသပ်...
Referred Article: ဧရာဝတီ၊ သဲသဲ
'ဗေဒင် ယတြာ အားကိုးမှု ပိုတိုးလာနေ'
FDA Announced7brands of consumable cooking oil
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ စားသုံးရန်မသင့်ဟု ကြေညာထားသည့် နယ်စပ်သွင်းစားဆီ (၇) မျိုးကို မြန်မာနိုင်ငံဗဟိုအစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဌာန (အက်ဖ်ဒီအေ) မှ စားသုံးရန်သင့်လျော်ကြောင်း အဖြေပေးလိုက်.....
(အက်ဖ်ဒီအေ) က ဇူလိုင် (၂၅) တွင် ထိုင်းနှင့် မလေးရှားနိုင်ငံတို့မှ တင်သွင်းသည့် စားဆီ (၄) မျိုးကို စားသုံးရန်မသင့်ကြောင်း.....
အဆိုပါ (၄) မျိုးမှာ (၁၈) လီတာဝင် အဝါရောင်ပလတ်စတစ်ပုံးများဖြင့် ထည့်ထားသည့် ကျောက်ပုဇွန်နှစ်ကောင် (Star Oil ကြယ်နီပုံ)၊ ကျောက်ပုဇွန်တစ်ကောင် အမှတ်တံဆိပ်၊ ရေနဂါး (Twin Sea Horse အမှတ်တံဆိပ်) နှင့် ငါးကြော်အမှတ်တံဆိပ် (Pamola Brand) တို့ ဖြစ်.....
ကြေညာဖမ်းဆီးခဲ့သည့် စားဆီ (၁၁) မျိုးမှာ အဆိုပါ ဆီ (၄) မျိုးအပြင် ထိုင်းနိုင်ငံသွင်း ပုဇွန်တစ်ကောင်၊ ပုဇွန်နှစ်ကောင်၊ တံငါတံဆိပ်၊ SAKURA ၊ Golding Oil ၊ ကဏန်းတံဆိပ်၊ ကြယ်စိမ်းတံဆိပ်တို့ဖြစ်...
Referred Article: ခေတ်ပြိုင်၊ NEJ
'စည်ပင်ပိတ်ထားသည့် နယ်စပ်သွင်းစားဆီ (၇) မျိုး စားသုံးရန်သင့်ကြောင်း အက်ဖ်ဒီအေကြေညာ'
Myanmar 500 Kyats Counterfeit Banknotes
ဗဟိုဘဏ်၏ ညွှန်ကြားချက်ပါစာအရ ၅၀၀ တန်ငွေစက္ကူအတုသည်
(၁) ဖယောင်းစက္ကူကဲ့သို့ သိသာစွာ ပြောင်ချောနေခြင်း
(၂) လုံခြုံရေးကြိုး လုံးဝမပါရှိခြင်း
(၃) ငွေစက္ကူ၏ မျက်နှာတဖက် မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်စာသား ပါရှိသည့် အပေါ်ဖက် ထိပ်ပိုင်းအရောင်ပေါ်လွင်မှုတွင် ခရမ်းရောင်မှာ အနီရောင်ဖက် သမ်းသည့်အရောင် ပေါ်လွင်မှုရှိခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ် စာသား၏ အောက်ဖက်အရောင် ပေါ်လွင်မှု၌ အနီရောင်ဖက် ပိုမိုပေါ်လွင်ခြင်း
(၄) ငွေစက္ကူနံပါတ်ရိုက်နှိပ်မှု၌ နံပါတ်စာလုံးများမှာ အနည်းငယ် "ပွိုင့်" သေးငယ်ခြင်း၊ အနီရောင် တောက်ပမှု နည်းခြင်း
(၅) ငွေစက္ကူ၏ ရှေ့နောက် မျက်နှာပြင် နှစ်ဖက်စလုံးကို ခြုံငုံ၍ ကြည့်ပါက ငွေစက္ကူစာရွက် အရောင်အသွေးမှာ အ၀ါရောင်သမ်းနေခြင်း
(၆) ငွေစက္ကူအပေါ်၌ မည်သည့်ဖောင်းကြွမှ မပါရှိခြင်း
(၇) ငွေစက္ကူမျက်နှာစာ ယာဘက်ရှိ ခြင်္သေ့ဦးခေါင်းရေ စာအောက်၌ ဖော်ပြထားသော (၅၀၀) တန်စာလုံး၏ (သုံည) စာလုံးများမှာ အနည်းငယ် သေးငယ်ခြင်း
(၈) နံပါတ်တူ ဘလောက်ပုံနှိပ် ထုတ်လုပ်ထားခြင်း...
Referred Article: မဇ္ဈိမ၊
၅၀၀ တန် ငွေစက္ကူ အတုများနှင့် ပတ်သက်၍ ဗဟိုဘဏ် ညွှန်ကြား
3 Nov 2011 မြန်မာ ငွေလဲလှယ်နှုန်းများ
► MMK/USD $ 1 = K 782
► MMK/FEC $ 1 = K 775
► SGD/MMK S$ 1 = K 613
► MYR/MMK RM 1 = K 253*
► MMK/THB ฿ 1 = K 25.64
► MMK/CNY ¥ 1 = K 124.06
► MMK/BDT ৳ 1 = K 10.09
► MMK/GLD 724,000 Tical/Ks
◁ အသုံးပြုပုံ/ ယခင်ရက် ၊ ◁ ယခင်လ နှုန်းထားများ
" dd.mm.yy USD/FEC/SGD/MYR
" 2.11.11 786/783/623/*
" 1.11.11 786/785/627/*
" 31.10.11 795/791/630/253
MMK မြန်မာ K ကျပ်
USD အမေရိကန် $ ဒေါ်လာ
SGD စင်္ကာပူ S$ ဒေါ်လာ
MYR မလေးရှား RM ရင်းဂစ်
THB ထိုင်း ฿ ဘတ်
CNY တရုတ် ¥ ယွမ်
BDT ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ৳ တာကာ
GLD ရွှေဈေး Tical ၁၆ ပဲရည်ပြည့်
*Rate From Previous Date
MMK/*** မြန်မာနိုင်ငံ၌ လဲလှယ်နှုန်း
***/MMK ယင်းနိုင်ငံ၌ လဲလှယ်နှုန်း
ကုန်ဈေးနှုန်းများ by 'ခေတ်လူငယ်'
Rates Sourced by 'Mr.Sail0rMoon'
See all the links below.
►Blogs ►အကြံပြု ►အသုံးဝင်
Myanmar ◄သတင်းဌာန ◄အားကစား
မြန်မာ ◄ဂီတ ◄ဗွီဒီယို ◄ရေဒီယို
Myanmese ◄စာပေ ◄ဗေဒင်/နက္ခတ်
ဗမာ ◄လူမှုရေးရာ ◄ဘလော့
Burmese ◄အနုပညာရှင် ◄တရား ဓမ္မ
º MRT White Board
စကာင်္ပူရှိ အိမ်/အိမ်ငှား ရှာနေသူများအတွက်
º Myanmar Videos
º Nets Collections
º စကားဝါမြေ အင်ဂျင်နီယာနှင့်ဆေးပညာရပ်ဆိုင်ရာ စာအုပ်စာတမ်းများ º
º စကားဝါမြေ အွန်လိုင်းမြန်မာ စာကြည့်တိုက် º
º Myanmar Ebooks º
º Burmese Classic ဖတ်စရာ º
º Book Planet º
º Myanmar Networks News º
º ဝိညာဉ်သစ် မြန်မာအွန်လိုင်း စာကြည့်တိုက် º
º Myanmar e-Library.com º
º English4Myanmar.com º
º မြန်မာ့အွန်လိုင်း စွယ်စုံကျမ်း º
º ကြေးမုံ သတင်းစာ º
º ကြေးမုံ Online º
º မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာ º
º New Light of Myanmar º
º ရတနာပုံ နေပြည်တော် သတင်းစာ º (အမေရိကန်)
º အာဟာရ စာစောင် º (ဂျပန်)
º အင်တာနက် ဂျာနယ် º (မြန်မာ)
º လင်းရောင်ခြည် အင်တာနက်ဂျာနယ် º (နော်ဝေး)
º The Myanmar Post သတင်းဂျာနယ်º (မြန်မာ)
º မိုးသောက်ကြယ် ဂျာနယ် º (ဂျပန်)
º လင်းရောင်ခြည် ဂျာနယ် º (နော်ဝေး)
º လူထုအသံ ဂျာနယ် º (အမေရိကန်)
º ခေတ်ပြိုင် ဂျာနယ် º (အမေရိကန်)
º ဈေးကွက် ဂျာနယ် º (မြန်မာ)
º ပေါ်ပြူလာ မြန်မာ ဂျာနယ် º (မြန်မာ)
º လျှပ်တစ်ပြက် ဂျာနယ် º (မြန်မာ)
º အလင်္ကာ ဂီတဂျာနယ် º (မြန်မာ)
º Internet ဂျာနယ် º (မြန်မာ)
º Interview ဂျာနယ် º (မြန်မာ)
º Popular Myanmar ဂျာနယ် º (မြန်မာ)
º Perfect Magazine º (မြန်မာ)
º မုခ မဂ္ဂဇင်း º (မြန်မာ)
º ရွှေအမြုတေ မဂ္ဂဇင်း º (မြန်မာ)
º People မဂ္ဂဇင်း º (မြန်မာ)
º Living Color မဂ္ဂဇင်း º (မြန်မာ)
º Perfect အောင်မြင်ခြင်း မဂ္ဂဇင်း º (မြန်မာ)
º သရဖူ မဂ္ဂဇင်း º (မြန်မာ) #Font
º Life Style º
º ကိုရီးယား မင်းသား၊ မင်းသမီးများအကြောင်း º
º ဘိုဘို ကာတွန်း Bo Bo Cartoon º # mirror
º Today Publishing House º
º├ Today မဂ္ဂဇင်း º (မြန်မာ)
º├ Lifestyle မဂ္ဂဇင်း º (မြန်မာ)
º├ PC World မဂ္ဂဇင်း º (မြန်မာ)
º├ CEO စီးပွားရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု မဂ္ဂဇင်း º (မြန်မာ)
º└ ပလုတ်တုတ် ကလေး ဂျာနယ် º (မြန်မာ)
º Yangon Media Group º
º├ ပန်းသတင်း º (မြန်မာ)
º└ ရန်ကုန်တိုင်းမ် º (မြန်မာ)
º Eleven Media º #Alt Add
º ├ Weekly Eleven ဂျာနယ် º (မြန်မာ)
º └ Biweekly Eleven ဂျာနယ် º (မြန်မာ)
º Kwe Ka Lu - ကရင်ဘာသာ စာစောင် º
º Myanmar Youth Media Club.net º
º Myanmar Songs.net º
º Myanmar MP3 Album.com º
º Myanmar MP3.net º
º လိုတရ º
º ပန်းစကား º
º အရိုင်းပန်း.com - Music º
º Flashband.net º
º Myanmar VCDs º
º Burmese Classic MTV º
º ရင်ခုန်သံ FM º
º Myanmar Lyrics º
º MFG - Myanmar Future Generations º
º MFG (Mirror 1) º
º MFG (Mirror 2) º
º MFG (Mirror 3) º
º Burmese MTV.com º
º ရွှေ ဗီဒီယို.com º
º ShweDream.com º
º Myanmar Videos & Songs º
º Bumese Classic º
º ခရမ်းပြာ အိမ်မက် º
º Luu Nge Diary º
º ShweO Server-2 º # Server-1 # mirror
º သံစဉ်လှိုင်း Entertainment º
● City FM # (မြန်မာ)
● အိမ်မက်လှိုင်း # (အမေရိကန်)
● အဖြူရောင်သံစဉ် # (သြစတြေးလျှ)
● ရင်ခုန်သံ FM # (စကာင်္ပူ)
● º သံစဉ်လှိုင်း Community º # (ထိုင်း)
● Just Music Radio # (ဗြိတိန်)
○ BBC #+
● မနက် ၆း၃၀ ၊ ● ညနေ ၅း၃၀ ၊ ● ည ၈း၁၅
● VOA #+
နံနက် ၅း၃၀~၆း၃၀ ၊ ၆း၃၀~၇း၀၀
ည ၆း၀၀~၇း၀၀ ၊ ၉း၀၀~၁၀း၀၀
● Window Media / ● Real Media
○ RFA #
● နံနက် ၇း၀၀~၈း၀၀
● ည ၇း၀၀~၈း၀၀ ၊ ● ည ၈း၀၀~၉း၀၀
● DVB #+
# Windows Media Player Needed
+ Real Media Player Needed
º BBC British Broadcasting Corporation (ဗြိတိန်) #Font
º VOA Voice Of America (အမေရိကန်)
º RFA Radio Free Asia (အမေရိကန်) #Font
º ဧရာဝတီ (အမေရိကန်)
º ယနေ့မြန်မာ (အမေရိကန်)
º DVB Democratic Voice of Burma (နော်ဝေး)
º မဇ္ဈိမ (ကနေဒါ)
º မိုးမခ (အမေရိကန်)
º ရိုးမ ၃ (အမေရိကန်)
º BurmaNet News (ထိုင်း)
º BNI: Burma News International (အမေရိကန်)
º သံလွင် အိမ်မက် (အမေရိကန်)
º သူရိယ (နော်ဝေး)
º ဟံသာဝတီ (ထိုင်း)
º Indo-burma News (အမေရိကန်)
º ဟစ်တိုင် (နော်ဝေး)
º နိရဉ္စရာ (အမေရိကန်)
º KNG:Kachin News Group ကချင် (အိန္ဒိယ)
º Kachin Post ကချင် (ကနေဒါ)
º မြို့တော်ပုသိမ် သတင်းစဉ် (စကာင်္ပူ)
º Khonumthung News ချင်း (နော်ဝေး)
º Kaowao Newsgroup ဂကောံပရိုင် မွန် (အမေရိကန်)
º IMNA:Indep`t Mon News Agency မွန် (အမေရိကန်)
º Arakan Review ရခိုင် (အမေရိကန်)
º Shan Herald Agency for News ရှမ်း (အမေရိကန်)
º သျှမ်းသံတော်ဆင့် ရှမ်း (ထိုင်း)
º Kaladan Press Network (ထိုင်း)
º SanZarniBo.com º
º SanZarniBo.net º
º Burmese Classic 7days º
º Myanmar Celebrities's Weekly Horoscope º
º Planet Horoscopes º
º ခေတ်လူငယ် ဗေဒင် º
º မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင်နှင့် နက္ခတ် º
º Yangon City7days Birth Chart º
º ဗေဒသုခ º
º မြန်မာနိုင်ငံ နက္ခတ်ဗေဒင် သင်တန်းကျောင်း (နဒီ) º
º နက္ခတ်ဗေဒင်မှတ်စုများ º
º ချမ်းမြေ့ဦးရဲ့ တာရော့ဗေဒင် º
º Advance Calculation Horoscope º
Traditional (Surya; Siddhanta System)
º CPB မြန်မာပြည် ကွန်မြူနစ်ပါတီ º
º ငုရင်ပြင် º
º Pho Ta Yoke's The Power of Fraternity º
º Myanmar Cupid Forum º
º YAMC Myanmar Chat º
º Myanmar Cyber Community º
º မြန်မာမိသားစု စကားဝိုင်း º
º မဟာမုနိ ရုပ်ရှင်တော်မြတ်ကြီး º
º Myanmar Image Gallery º
º Myanmar Photo Images º
º Myanmar Unicode º
º Myanmar Wedding.com º
º ခေတ်လူငယ် º
º Myanmar In Singapore º
º British Council Burma º
º Myanmar Network (British Council) º
º Shwe Rooms º
º Sttay.com º
º Founn.com º
º Online e-Departure Form º Union of Myanmar
º US DV Program º United State
º Gmail º º Yahoo Mail º º Hotmail º º SingTel Free SMS º Singapore
º M1 Free SMS º Singapore
º Starhub Free SMS º Singapore
º Myanmar Embassies
º Foreign Embassies in Myanmar
º ဆွေနိုင် º
º ဧရာဝတီ Blog º
º ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ º
º Canada Myanmar º
º Ray's Life Book º
º Idea မဂ္ဂဇင်း º
º မာယာ မဂ္ဂဇင်း º Maya
º တာရာမင်းဝေ အမှတ်တရ º
º Myanmar Celebrities º
º Myanmar Hunks º
º ဇာဂနာ º Zar Ga Nar
º ကိုထိုက် º Ko Htike's Prosaic Colletion
º နိုင်းနိုင်းစနေ º Nine Nine Sa Nay
º နေဘုန်းလတ်ရဲ့ ကျွန်တော်လွတ်ကျခဲ့တဲ့ မြို့တော် / #.net
º ရဲရင့်ငယ် (ကနေဒါ) º
º နစ်နေမန်း º Niknayman
º မေငြိမ်း º May Nyane
º Bago Thar's MP4 for All º
º Linn Ar Yone's Korean Movies º
º Chit Sanm's Luxury Music º
º ကြယ်စင်ကရဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် º
º Canada Myanmar Group's ကနေဒါ မြန်မာ º
º အညတရရဲ့ Heart Museum º
º ဆုံဆည်းရာ º
º Cartoon Beruma ဘီရုမာ º
º လမ်းပြကြယ် º
º DVB Sports º
º Soccer Myanmar º
º Myanmar Goal º #Font
º MNL - Myanmar National League Cup º
º Yadanar Bon FC º
º Yangon United FC º
º KBZ FC º
º Myanmar Chelsea Fan Blog º
º Myanmar Man Utd Fan Blog º
º Myanmar Man Utd Fan Forum º
º MUtd Fan.com º
Comments for 'Little Myanmar' improvements
º Gtalk Funny Avators
º Beware of CNG transportation
º Buddha's Dhamma
º Welcome to Merlion City, Singapore
ဘုရားဂုဏ်တော် (၉)ပါး ပါဠိ
အနုတ္တရော ပုရိသ ဒမ္မသာရထိ
ကမ္ဘာ့အဝှမ်း အင်တာနက်မှ မြန်မာစာမျက်နှာများ ကြည့်ရန်...
1) ZawgyiOne2008.ttf for most web sites.
2) Myanmar1.ttf for 'BBCBurmese.com'
3) bit.ttf for 'RFA Radio Free Asia'
4) MyMMUniversal.ttf for 'သရဖူ မဂ္ဂဇင်း'
5) MyaZedi.ttf for 'Myanmar Goal.com'
Little Myanmar's best viewed with Zawgyi Myanmar Font. ZawgyiOne2008.ttf
littlemyanmar.org is also reachable with www.littlemyanmarorg.co.cc
Search Maps with Google Maps
Search Singapore Maps with SLA MAP
ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံသူ/သား ဖြစ်ရတာ...